Kutanga kweiyo pasteboard fekitari muPaseky nad Jizerou yakadzoka kubva muna 1882, apo hama dzeRössler dzakatanga fekitari yekugadzira kachena kadhi yakagadzirwa nemakadhibhodhi ekurongedza zvigadzirwa iyo indasitiri yegirazi mudunhu reJablonec. Iyo imwezve nguva yekuenderera mberi kwehupenyu hwekambani inoonekwa nekuwedzera kwechirongwa chekugadzira uye nzvimbo yekugadzira.
Kugadzirwa kwezvemichero uye zvigadzirwa zvinoratidza yedu yakazara hunhu hunhu kune zvakasikwa.
Maitiro ndeimwe yemirairo yepamusoro yehukama mukati uye kunze kwekambani.
Hushamwari uye hunyanzvi basa revatengi ibasa redu ratiri.
Yedu yekupa hupenyu hwehupenyu hwese hwese haina kugumiswa nenzvimbo dzekambani.
Basa repamusoro rakarongeka ndeye mupiro wedu mukubudirira kwenzvimbo.
EMBA inobatanidzwa zvikuru munharaunda yebatsiri uye yevanhu. Inobatanidzwa mukusimudzirwa kwemishonga inobatsira yevanhu pamwe nekwaniso yeko kune mabasa kunze kwemiganhu yeCzech Republic.
EMBA yakakunda mukana wakaenzana weNyika Mukurwisana, kukwikwidzika kwevashandirwi munyika yose kunoita kuti vanhu vane utano hwehutano vabate zvakaenzana pamusika wevashandi, vachiita kuti vabatanidzwe muchikwata.